समाज Archives - Page 52 of 55 - कृषि पत्रिका
चितवन। गिठा र भ्याकुर खोजेर खाने तथा खोरिया फाँडेर मकै कोदो लगाएर बस्ने विकट गाउँका चेपाङको दिनचर्या फेरिन थालेको छ । अहिले कतिपय चेपाङ बाख्रा पालनमा सक्रिय छन् भने कतिपय तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन थालेको शक्तिखोरका दलबहादुर चेपाङको भनाइ छ । केही चेपाङ अझै छ महिना अनिकाल र छ महिना सहकालमा जीवन गुजार्दै आए […]
धादिङ। खेतबारीको नाममा यत्ति हो । वर्षभरि खाने अन्न यही खेतको धान हो । अरु केही छैन । गत वर्षहरुमा ३० मुरी धान फल्थ्यो । चाडपर्वको खर्च समेत यही धानबाट गर्ने गरिएको थियो । अहिले धानको बाला निस्किएपछि सबै सुकेर भुस मात्र फल्यो । अब हामी कसरी बाँच्ने ? नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ७ तल्लोबेंसीका […]
च्याउ खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै
नेपालगञ्ज । व्यावसायिक च्याउ खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि बाँकेका करीब ३ सय किसान सो खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । थोरै पूँजी लगानी गरी खेती तथा व्यवसाय गर्न सकिने भएकाले पनि च्याउखेतीमा विपन्न किसानको आकर्षण बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । अहिले जिल्लाका कोहलपुर, कारकाँदो, खजुराखुर्द, पुरैना गाविस तथा नेपालगन्ज नगरपालिकाका किसान […]
दशैका लागि कर्णालीमा जहाजबाट चामल लैजान शुरु
सोमबार १७ असोज, २०७३
नेपालगन्ज। चाडपर्वका बेला सर्वसाधारणले भोकमरीको समस्या बेहोर्नु नपरोस् भनेर खाद्य संस्थानले कर्णालीका लागि हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको छ । दसैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर संस्थानले दुर्गम कर्णालीमा हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको हो । कर्णालीका पाँचवटै जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको जनाउँदैै हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा हवाई मार्गबाट ढुवानी भइरहेको नेपालगञ्जस्थित […]
चेपाङ समुदायबाट दसैँको लागि डेढ करोडको खसीबोका उत्पादन
चितवन। चितवनको पहाडी गाविस सिद्धिका चेपाङ समुदायले दसैँलाई लक्षित गरेर डेढ करोडको खसीबोका उत्पादन गरेका छन् ।सिद्धि गाविसका ६४८ घरधुरीले दसैँका लागि मात्र डेढ करोड मूल्य बराबरको खसीबोका उत्पादन गरेका हुन् । दसैंका लागि भनेर चेपाङ समुदायले १ हजार ५०० खसीबोका उत्पादन गरी बिक्रीको लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा व्यावसायिक […]
गोरखाको उत्तरी भेगका १४ गाविसमा खाद्यान्नको अभाव
गोरखा। दसैँका मुखमा जिल्लाका उत्तरी भेगका १४ गाविसमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ ।सदरमुकामस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा चार हजार क्विन्टल खाद्यान्न मौजाद रहेपनि दुर्गमका डिपोमा विगत एक वर्षदेखि खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन ।ढुवानी हुन नसक्दा जिल्लाका काशीगाउँ, केरौँजा, सिर्दिवास, बिही, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ, चुम्चेत, छेकम्पार, उहिया, गुम्दा र लाप्राकलगायत १४ गाविसमा चामलको अभाव हुँदै […]
पाँचथर। नेपालीहरुको महान् पर्व दसैँ तिहार नजिकिँदै जाँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको अधिकांश सडक अवरुद्ध हुँदा ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ ।वर्षादका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेको हुँदा सदरमुकामलगायत झापाका विभिन्न सहर बजारबाट खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्न नसक्दा ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको हो । जिल्लाको दुर्गम र उत्तर पूर्वी […]
डिस्टिलरीबाट निस्कने फोहोरका कारण तरकारी खेतीमा क्षति
नेपालगन्ज। बसुदेवपुरमा सञ्चालित भेरी डिस्टिलरीबाट निस्कने फोहोर, कालो खरानी र धूवाँले गर्दा वरिपरिका किसानले लगाएको खेतीबालीमा क्षति पुगेको छ । डिस्टिलरीबाट उडेर आउने कालो खरानी, धूवाँ र फोहोरले किसानले लगाएको तरकारी खेतीमा बर्सेनि नोक्सानी पु¥याउँदै आएको छ । डिस्टिलरीबाट निस्केको फोहोर तथा धूवाँ ३ किलोमिटर वरपरसम्म पुग्ने भएकाले आजित भइसकेको किसानहरू बताउँछन् । बसुदेवपुर जानकीटोलका […]
काँक्रा बेचेर दसैँ खर्चको जोहो
बझाङ। दैनिक तीन घन्टाको पैदल बाटो हिँडेर सदरमुकाम चैनपुर आउनु भएकी जयपृथ्वी नगरपालिका–९ की हिरादेवी खड्काले काँक्रबाट मनग्य आम्दानी गर्दैआउनुभएको छ । काँक्रा बेचेर दसैँको खर्च जुटाउन उहाँ चैनपुर आउनुभएको हो । उहाँले काँक्राबाट मासिक रु १५ हजार आम्दानी गर्नुभएको छ । “घरमा कमाइ गर्ने कोही छैन छोराछोरी साना छन्, श्रीमान् पनि छैनन् । दसैँको […]
कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन हुँदै
कञ्चनपुर । कृषिमा यान्त्रीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन हुने परियोजनामा ‘पकेट, ब्लक र जोन’मा जग्गालाई विभाजन गरी व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरिने भएको हो । कञ्चनपुरमा परियोजना सञ्चालनका लागि रू. छ करोड बजेट विनियोजन भएको कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास […]